နိုင်ငံတကာ ဘွဲ့လက်မှတ်ဆိုတာ ဘာလဲ။ | ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ
Maite Ncuesa | 02/01/2022 22:12 | အဆင့်မြှင့်တင် 02/01/2022 22:17 | လေ့လာမှုများ
El နိုင်ငံတကာဘွဲ့များ ပြီးပြည့်စုံသော လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကျောင်းသားများကို ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၊ ဝေဖန်တွေးခေါ်မှုနှင့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို အားပေးသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသည်။ ကျောင်းသားများသည် ဖြစ်တည်မှု၏ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရန် အရင်းအမြစ်များနှင့် ကိရိယာများကို ရယူကြသည်။.
၎င်းတို့၏ ပညာရေးကမ်းလှမ်းချက်တွင် ဤအဆိုပြုချက်ပါ၀င်သော ပညာရေးစင်တာများသည် ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် သက်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်ရှိသည်။ ဤအသိအမှတ်ပြုခံရသော ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် IB World Schools ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
1 နိုင်ငံတကာ အာရုံစူးစိုက်မှုဖြင့် ထူးချွန်သော သင်တန်းတစ်ခု
2 စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းများကို မြှင့်တင်ပေးသော သင်တန်းတစ်ခု
နိုင်ငံတကာ အာရုံစူးစိုက်မှုဖြင့် ထူးချွန်သော သင်တန်းတစ်ခု
ဤအသိအမှတ်ပြုမှုမခံရမီ၊ စင်တာသည် သင်ကြားလိုသောပရိုဂရမ်သို့ ၎င်း၏လျှောက်လွှာကို တင်သွင်းသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ပြီးနောက်၊ သက်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်ချက်ကို စောင့်ပါ။ နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်မှာ ဘယ်အချက်တွေပါဝင်သလဲ။ သင်ကြားရေးအဖွဲ့တွင် အရည်အသွေးပြည့်မီသော သင်ကြားမှုပေးစွမ်းရန် လိုအပ်သော အရည်အချင်းများနှင့် အသိပညာရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။
International Baccalaureate ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သည့် ထူးချွန်မှုနှင့် ကိုက်ညီသော အရည်အသွေးတစ်ခု. International Baccalaureate တွင် ဘုံတွဲတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်သော တန်ဖိုးများသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အပြုသဘောဆောင်သော အမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ် ထားခဲ့သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် ၎င်းတို့သည် အများအကျိုးအတွက် ကတိပြုထားသော စည်းလုံးညီညွတ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်း တည်ဆောက်ရေးကို မြှင့်တင်ပေးသည့် အခြေခံမူများဖြစ်သည်။
ကျောင်းသားများကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသော သင်ကြားရေးပတ်ဝန်းကျင်တွင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည်။ ကျောင်းသားတစ်ဦးစီသည် အခြားအဖြစ်မှန်များ၊ မြင်ကွင်းများနှင့် မတူညီသော မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းများကို ရှာဖွေရန် ၎င်းတို့၏ သက်တောင့်သက်သာဇုန်မှ ထွက်သွားနိုင်သည်။ ပရိုဂရမ်၏အမည်သည် ၎င်း၏အနှစ်သာရကို ဖော်ပြသည်- နိုင်ငံတကာဇာတ်ကောင်ရှိတယ်။. ဤအခြေအနေမျိုးတွင်၊ လူသားသည် ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်သောသဘော၊ သိချင်စိတ်၊ သည်းခံမှု၊ နှိမ့်ချမှုနှင့် ရိုးသားမှုတို့မှအစပြုသည့် ရူပါရုံကို ရရှိသည်။ ၎င်းသည် ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများ၏ ပြောင်းလဲမှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ကျောင်းသားသည် ဤနေရာနှင့် ယခုတွင် ဘောင်ခတ်ထားသော အခြေအနေများနှင့် ဆက်စပ်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်များချရန် အဖြေများနှင့် ကိရိယာများကို ရှာဖွေသည်။ သမိုင်းခေတ်တစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများနှင့် အခြေအနေများရှိသည်။ နိုင်ငံတကာ သင်တန်းတစ်ခုသည် မတူကွဲပြားခြင်း၏ အရေးပါမှုကို တန်ဖိုးထားပြီး လူသားများ စည်းလုံးညီညွတ်စေသည့် ဝန်းကျင်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ထိတွေ့မှုကိုလည်း တန်ဖိုးထားပါသည်။
စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းများကို မြှင့်တင်ပေးသော သင်တန်းတစ်ခု
ကျောင်းသားများသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အမြင်ထက် ကျော်လွန်၍ အမှန်တရားကို စူးစမ်းလေ့လာကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝအတွေ့အကြုံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုရှုထောင့်ကို ဖြည့်စွက်တန်ဖိုးများနှင့် ရှုထောင့်များကို ထင်ဟပ်စေသည့် အခြားအမြင်များဖြင့် ကျယ်ပြန့်စေသည်။ ကျောင်းသားသည် သင်ယူမှုတွင် တက်ကြွသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ အခွင့်အလမ်းသစ်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် သင်သည် လက်တွေ့ဘဝနှင့် ပိုမိုနီးကပ်လာသည်။ သင်တန်းသည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်မှုကို အားပေးသည့် အခြေအနေတွင် ပြုလုပ်သည်။
သင်ယူခြင်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့် လုံး၀အမြင်ရှိရုံသာမက ဒေသန္တရတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။. ထို့ကြောင့်၊ ပရိုဂရမ်သည် လူသား၏ အကောင်းဆုံးဗားရှင်းကို မြှင့်တင်ပေးသည့် အရည်အချင်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားပြီး အရည်အချင်းရှိသူများအတွက် အစားအစာဖြစ်သည်။ ဤအရည်အချင်းများသည် လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်၊ တွေးခေါ်မှုနယ်ပယ်နှင့် ဆက်သွယ်မှုနယ်ပယ်တွင် ဘောင်ခတ်ထားသည်။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည် International Baccalaureate ပရိုဂရမ်များကို ပေးဆောင်သည့် ကျောင်းများတွင် အလွန်တွေ့ရသော ဝေါဟာရများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီပလိုမာအစီအစဉ်သည် International Baccalaureate ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောအဆိုပြုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၁၉ နှစ်ကြား ကျောင်းသားများအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ပရိုဂရမ်၏ မည်သည့်ဘာသာရပ်များ ပါဝင်သနည်း။ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှု၊ Monograph၊ Creativity နှင့် Theory of Knowledge တို့သည် အဆိုပြုချက်အချို့ဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသော အယူအဆများသည် အဓိကအကြောင်းအရာများကို ရည်ညွှန်းသည်။
ကျောင်းသားများသည် ၎င်းတို့၏ အသိပညာကို ချဲ့ထွင်ရုံသာမက လွတ်လပ်ပြီး တာဝန်သိသော လူသားများအဖြစ်လည်း ကြီးပြင်းလာကြသည်။ လူ့ကျင့်ဝတ်သည် လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် အပြုသဘောဆောင်သော အမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ် ထားရှိသည့် လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုတွင် အလွန်ပါဝင်ပါသည်။ ကျောင်းသားများသည် သဘာဝနှင့် နီးစပ်ကာ ၎င်း၏အဖြစ်မှန်ကို စူးစမ်းလေ့လာပါ။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် အသိပညာ သီအိုရီဖြင့် အလွန်အရေးကြီးသော စည်းကမ်းတစ်ခုအတွက် အချိန်ကိုလည်း မြှုပ်နှံထားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ » လေ့လာမှုများ » နိုင်ငံတကာ ဘွဲ့လက်မှတ်ဆိုတာ ဘာလဲ။